Cool Zvishongo ari paIndaneti slots mutambo kubva WMS uye ndiye wokutanga mutambo kubva Roster kwavo kushandisa Kuzarisa inobhadhara injini. The slots rinonyanya rine 6 hunoparara uye inobhadhara nzira dzose. Unogona kutamba mutambo uyu yaderera 50p paminiti kuruka kuti sezvinongoitawo £ 200 kuruka. Game zvakare ine bhonasi vaitenderera zvakadai vakasununguka Tunoruka, cascading Gwenzi uye remake.
Graphics uye Music
Cool zvishongo ane kungoti kinda dingindira pamwe zvishongo akasiyana chitsvuku aishongedza ari Gwenzi. The Graphics havasi kuti zvakanaka kunyora zvakawanda pamusoro asi ivo chete nezvebasa zvakakwana kuita kwako mutambo kutamba ruzivo kwete bhowa. Nziyo zvakare riri chete mitsetse uye akarurama anoita zvakakwana. Kunyange here mwoyo uri kinda vakasara wakataira zvakawanda.
Nokuti mutambo rinowanikwa mhiri platforms zvose Cool zvishongo chaizvoizvo zvakanaka optimized chimwe chete platforms. The musabata Chidzitiro achipindura pamusoro dzeserura mukuru uyewo mutambo anotamba panze pasina zvikuru lags kana sokunonoka. Chaizvoizvo zvakanaka basa kubva WMS iri chinoumba.
The Kuzarisa Pays injini rinonyanya kunokupa akawanda nzira ndiwane mhuka zviratidzo kunoparadza pamusoro Gwenzi kuburikidza nenyunje uye kuputika kwose kwose. Game unoshanda pasina nzira iri akafanana ainakidza mitambo slots kuhwinha unofanira kuwana 4 kana kupfuura chienderane zviratidzo dzichienderana vertically kana yakatambarara. Zvadaro izvi mashiripiti zviratidzo vanoparadzwa kupa imi zviratidzo itsva uye mukana kuhwina zvakare.
Cool zvishongo iri izwi rinoreva 5 Reel slots mutambo multiple nzira kuhwina. Unogona kutamba mutambo uyu kubva 50p paminiti kuruka kuti sezvinongoitawo 200 £ ari kuruka. The slots ane yakaderera kuti svikiro chinopesana ne- yakawanda kazhinji yokuvamba Unobata diki. Newewo kuita kuwana guru Unobata asi iwe gotta zvishoma murefu kuti.
The inofadza uye nokutsanya aifamba hunhu mutambo uyu kuti akuyeudzirei NetEnt kwakaita Starburst. Chaizvoizvo vaviri mitambo izvi zvinopa yakafanana mhando mutambo achitamba ruzivo kunyanya sezvo zvose zvakafanana mhando mutambo injini.
Also this game has a free spins bonus which when triggered will you give you up to 8 vakasununguka Tunoruka. This is actually triggered when 4 or more of the bonus symbols are destroyed.